Kenya: Weeraro ka dhacay Gobolka Xeebta - BBC Somali
Kenya: Weeraro ka dhacay Gobolka Xeebta
Rasaas ayaa lagu soo waramayaa in laga maqlay gobolka xeebta ee dalka Kenya, degaanka Lamu, halkaas oo bishii hore dhowr weerar oo ka dhacay ay sheegteen kooxda islaamiga ah ee al-Sahbaab.
Weriyaha BBC-da ee Naierobi Dannis Okari ayaa sheegaya in guryo dab la qabadsiiyey degaanka Hindi oo ku dhow magaalada Mpeketoni oo ah halkii bishii hore lagu dilay in ka badan 60 qof. Waxa uu weriyuhu intaasi ku darayaa in sidoo kale xarun boolis lagu weeraray degaan kale oo la yiraahdo Gamba.
Tafaasiil laga ma hayo qasaaraha ka dhashay weerarkan, balse waxa sheegatay kooxda shabaab.
Xarunta qaran ee ka hortaga musiibooyinka ee Kenya ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Booliska ay ka jawaab bixinayaan dhacdooyinkaasi.Hay'adda bisha ayaa iyaduna sheegtay in kooxo deg deg ah u dirtay goobahaasi.
Bishii hore, weerarka ka dhacay magaalada Mpeketoni ayaa waxa dab la qabad siiyey xarumo gannacsi.